Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Warshada buufinta barafka ee Shiinaha
250ml oo tayo sare leh sanadka cusub xumbo carruurta barafka buufinaya arooska, kirismaska, carnival
Buufinta barafka waa barafka macmalka ah ee dhaqso u baaba'a, diyaarna u ah xafladaha carnival si loo abuuro dhul baraf farxad leh.
Nooca: Qalabka Qurxinta Kirismaska, Agabyada Xafladaha
Nooca Shayga Kirismaska: Qurxinta Kirismaska
Summada gaarka ah jumlad iib ah xumbo xaflada farxada leh Shun Pai buufiska barafka ee qurxinta kirismaska
Shun Pai party xumbo buufinta barafka ayaa ku fiican arooska, dhalashada, Halloween, habaynta goobta sanadka cusub.
Joker buufinta barafka loogu talagalay dabaaldega Kirismaska
Joker buufinta barafka, halkee qaab kaftan ah ayaa la daabacay, dhaqso u dhalaalin, loogu talagalay xafladaha iidda waalan, sida Sannadaha Cusub, Habeenka Kirismaska, xafladaha dibadda iyo gudaha iyo arooska, iwm.
Nooca: Xaflad Agabka Qurxinta
200ml xaflad fiista de Espuma buufinta barafka ee dabaaldega carnival Holi
buufinta barafka ee Espuma, waa nooc buufinta barafka ah, waxa kale oo loo yaqaan carnaval carnaval fiista de espuma nieve spray, taas oo u fiican dhacdooyinka waaweyn ama carnivals.
Nooca: Qalabka qurxinta Christmas-ka
Nooca Shayga Kirismaska: Qurxinta Xafladaha Kirismaska ​​ee Dibadda
Buufin barafka Taiwan 150ml ee qurxinta xaflada
Buufinta barafka ee Taiwan, qurxinta xafladaha, waa buufinta barafka macmalka ah ee degdega u baxa, ku haboon xafladaha xafladaha waalan si loo abuuro jawiga barafka.
Nooca : Qalabka qurxinta Christmas-ka
Arooska jumlada ayaa doorbidaya buufin xumbo baraf leh oo tayo wanaagsan leh
Buufiinta barafka xumbo xisbigu, kaas oo korkiisa uu ku daboolan yahay qaab kaftan ah, wuxuu waafaqsan yahay jawiga xafladaha, gaar ahaan inta lagu jiro Maalinta Halloween.
Nooca Shayga: Qurxinta Barafka Dibadeed (Christmas, Halloween, Years New…)
Xisbigu wuxuu bixiyaa qurxinta midabada leh ee waalan ee Bear Snow Spray ee kirismaska, carnival, dabaaldega Halloween
buufinta barafka ee Bear, kaas oo korkiisa ay ku daboolan yihiin qaabab qurxoon, waafaqaya jawiga xafladaha, gaar ahaan inta lagu jiro
Kaftanka qoriga oo tayo sare leh buufin baraf ah oo loogu talagalay dabaaldega carnival
Qoryaha kiciya Joker buufinta barafka, leh awood weyn, wuxuu buufin karaa baraf cad oo macmal ah sare iyo fogba waana iibinta kulul ee waddamo badan.
Nooca: Qalabka Xaflada & Xafladaha, Agabka Qurxinta Kirismaska
Habka Daabacaadda: midab cad ama 4
Nooca Shayga Kirismaska: Qurxinta xaflada dibadda
250ml xaflad waalan oo midab leh oo lagu buufiyo baraf macmal ah oo loogu talagalay Halloween ama Habeenka Kirismaska
Buufinta barafka sixirka waa barafka macmalka ah ee si dhaqso ah u baaba'a, diyaarna u ah xafladaha carnival si loo abuuro dhul baraf farxad leh.
Nooca Shayga Kirismaska: Qurxinta Xafladaha Dibadda
2021 badeecada kulul ee qosolka leh ee kirismaska ​​​​ fadliga Santa Clause buufiska barafka ee qurxinta xaflada
Buufinta barafka noocan oo kale ah, oo leh qaababka Santa Clause iyo qaab kale oo qurxoon, waxay buufin karaan baraf been abuur ah waxayna abuuri karaan goob baraf qurux badan.
Kicin qori buufinta barafka waa buufin baraf macmal ah oo leh awood weyn, si dhakhso ah u uumibaxa, oo ku habboon xafladaha xafladaha waalan si loo abuuro jawiga barafka.
Nooca : Christmas Qurxinta Alaabta
buufin barafka Doraemon 250ml jumlad ahaan loogu talagalay dabaaldega kirismaska
buufinta barafka Doraemon 250ml jumlo
Doraemon buufin barafka, sidoo kale loo yaqaan been abuur buufin barafka, buufinta barafka xisbiga, si degdeg ah u dhalaali, loogu talagalay xafladaha iidda waalan, sida Sannadaha Cusub, Habeenka Kirismaska, xafladaha dibadda iyo gudaha iyo arooska, iwm.
Color Boss buufin barafka loogu talagalay dabaaldega carnival
Midabka buufinta barafka, wuxuu ka samaysan yahay dhalada macdan ama qasacad, badhan caag ah iyo faruur wareegsan, oo leh midabyo kala duwan. Waxay abuuri kartaa baraf qurux badan waxayna ku siin kartaa dhalanteed aad ku dhex socoto adduunka barafka midabada leh.
Habka Daabacaadda: 6 midab
Jumlada kirismaska ​​​​buluug waxay ku buufin kartaa baraf qiimaha ugu fiican
Buluuggu wuxuu buufin karaa baraf, oo leh waxyaabo badan, wuxuu ku buufin karaa baraf cad cad oo caadi ah geedaha kirismaska ​​​​iyo ubaxyada, oo ku habboon qurxinta jiilaalka.
buufin baraf xisbiga iibka Hot ee alaabta dhalashada arooska
Buufinta barafka xumbo xisbiga, oo ay ku jiraan xumbo qani ah, gaas badan, baraf badan, ku buufin karaa baraf cad caadiga ah on geedaha Christmas iyo ubaxyada, oo ku habboon qurxinta jiilaalka.
Jumlada xaflad tayo sare leh oo Ruush chei barafka buufin loogu talagalay dabaaldega arooska
buufinta barafka Chei, si dhakhso ah u dhalaali, looguna talagalay xafladaha damaashaadka waalan, sida sanadaha cusub, habeenka kirismaska, xaflada dibadda iyo gudaha iyo arooska, iwm.